Taliye sare oo lagu dhaawacy Qarax ka dhacay Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Isniintii lasoo dhaafay taliye katirsanaa Ciidanka dowladda ayaa u dhintay dhaawac culus oo kasoo gaarey qarax miino oo lagula eegtay duleedka Baardheere.
LUUQ, Soomaaliya - Sarkaal katirsan Ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo C/risaaq Maxamed Daa'uud iyo dhowr askari ayaa ku dhaawacmay qarax miino oo shalay lagula eegtay meel ku dhaw degmada Luuq, ee gobolka Gedo.
Dhaawaca Sarkaalka ayaa ka dhigay Isbitaalka degmada, waxaana la sheegay in ay jireen askar kale oo waxyeello kasoo gaartey weerarka oo Mas'uuliyadiisu sheegatay Kooxda Al-Shabaab.
Labo maalin kahor, Taliyihii Ururka qeybta 43 -aad Guutada 10 -aad, Ururka 49 -aad ee Ciidanka Xoogga dalka ee degmada Baardheere Gaanshaanle Maxamed Dheere ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray miino dhulka loogu aasay oo ku qaraxday gawaari uu dadka saarnaa kamid ahaa taliyaha Maalin kahor.
Kooxda Al-Shabaab ayaa mudooyinkii dambe kordhisay qaraxyada miino xili dalka uu ku jiro marxalad kala-guur ah oo la isku khilaafsan yahay doorashooyinka oo waqtigoodii loogu tala-galay in la qabto dhaafey.
Jubbaland ayaa war kasoo saartey weerarkii shalay ka dhacay nawaaxiga Luuq ee lagu dhaawacay taliyaha iyo askarta la socotay, iyadoo ugu baaqdey shacabka inay qeyb ka qaataan ciribtirka Al-Shabaab.
0 Comments Topics: al-shabaab gedo jubbaland qarax
Xiisadda ka jirta Gobolka Gedo iyo Dagaalkii ka dhacay Balad-Xaawo waa dagaal beelleed oo shaar loo galiyay, waa dagaal uu Madaxweyne Farmaajo rabo in uu kaga aar-guto beesha Axmed Madoobe oo sida uu aaminsan yahay ka fara maroojisay maamulka magaalada Kismaayo. Gedo waxaa ka socdo dagaal Sokeeye oo Mareexaan iyo Ogaadeen u dhaxeeya.